MD Farmaajo raaligelin ka bixiyay xarigii Qalbi-dhagax - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > MD Farmaajo raaligelin ka bixiyay xarigii Qalbi-dhagax
MD Farmaajo raaligelin ka bixiyay xarigii Qalbi-dhagax
July 30, 2018 admin644
Admiral Maxamed Cumar Cismaan Guddoomiyaha ururka ONLF ayaa sheegay in Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu Ururka raali gelin ka siiyay xarigii C/kariin (Qalbi-dhagax), kadib markii ay ku kulmeen magaalada Asmara ee dalka Eritrea.
Wareysi uu siiyay Admiral Maxamed Cumar Cismaan Idaacada Codka Maraykanka ee VOA laanta afka Soomaaliga ayaa sheegay in kulan ay yeesheen Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu is afgarad ku dhamaaday ayna arrimo kala duwan ka wadahadleen.
“Madaxweynaha Soomaaliya inuu aad uga xunyahay ayuu muujiyay raaligelina ka bixinayo,hadda kahorna mowqifka baarlamaanka uu raacsan yahay ayuu sheegay si qalad ah inay dad kale u maamuleen ayuu sheegay.”ayuu yiri Admiral Maxamed Cumar Cismaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa sarkaalka ka tirsan ururka ONLF waxa ay bishii September 2017-kii ku wareejisay Itoobiya, balse dhammaadkii bishii June ee sanadkan ayaa waxaa sii daayay Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Itoobiya Abiy Ahmed .
Hase yeeshee guddoomiyaha ururka ONLF ayaa ku tilmaamay dowlada Ethiopia inay tahay gumeysi ayna yihiin dhaqdhaqaaq gobanimadoon ah balse waxa uu carabka ku dhuftay inay u socdaan dowlada Ethiopia wadahadalo uusan carabaabin heerka uu gaarsiisan yahay.
Wasiir ka tirsanaa Maamulka Hirshabeelle oo ku geeriyooday Muqdisho
Madaxweynaha Galmudug oo dib ugu soo laabtay Dalka (Sawirro)
Dowlada federaalka oo maamul goboleedyada u fasaxday lacag horay looga xayiray